Tetika 10 ho an'ny Plants vs Zombies 2 izay hanampy antsika handresy ny ambaratonga | Vaovao IPhone
Ora vitsy lasa izay, namoaka ny lalao kintana tamin'ny fahavaratra tany amin'ny firenena rehetra ny PopCap: Plants vs Zombies 2. Tamin'ny famerenana nataonay dia niresaka momba ny tena tanjon'ny lalao izahay ary indrindra ireo fiasa roa izay hitaomana ny zombies tsy hiditra ao an-tranonay. Saingy, araka ny nolazaiko anao, amin'ny ambaratonga sasany dia hahita olana bebe kokoa ianao ary Tsy ho mora ny handalo ny ambaratonga toy izay hatrizay.
Noho ireo tetika, torolàlana na fanampiana 10 nosoratanay etsy ambany ireo, dia ho vitanao ny handingana ny haavon'ny Plants vs Zombies 2 haingana kokoa amin'izay laninao izao. Ireo cheats dia ho zava-dehibe amin'ny haavon'ny lalao. Eo alohan'izay!
1 Ny voninkazo masoandro dia zava-dehibe kokoa
3 Araraoty ny vokatry ny zavamaniry eny andalana tsy misy sakana
4 Mampiasà otrikaina amin'ny fotoana mety
5 Karatra vaovao eto amin'ny tontolo volomparasy
6 Fomba fandresena amin'ny laharana farany III: Tontolo Piraty
7 Atsaharo ny haavon'ny haavon'ny harena Yeti
8 Raha miditra amin'ny ambaratonga Yeti isika dia mila mamita azy
9 Ahoana ny famonoana ny zombies ahidrano amin'ny fomba mahomby
10 Zombies dia manaraka hatrany ireo zotra mitovy
11 Fanamafisana hatrany amin'ny tsanganana voalohany
Ny voninkazo masoandro dia zava-dehibe kokoa
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny lalao dia ny masoandro. Raha tsy misy masoandro dia tsy afaka mividy zavamaniry hamono zombies isika ary noho izany dia tsy maintsy mampiasa voninkazo maintso faran'izay betsaka isika. Mba hanaovana izany dia izao no toro-hevitra omenay:
Mamboly voninkazo roa tanomaso alohan'ny manomboka mamboly ireo zavamaniry mandatsaka "baomba." Arovy ny tanamasoandro amin'ny ovy na toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany.
Fampiasana azy ireo voninkazo roa heny fa tsy ny an'ny tsirairay na dia sarobidy kokoa aza izy ireo.
Fambolena otrikaina raha ilaina, raha miatrika fahafatesan-kery tsy ho ela isika.
Araraoty ny vokatry ny zavamaniry eny andalana tsy misy sakana
Amin'ny ambaratonga sasany dia ho hitantsika fa tsy feno ireo laharana satria maro ny toerana rano na rakotry ny fasana. Amin'ireo tranga ireo izay handehanan'ny zombie haingana dia tsy maintsy ampiasaintsika ireo zavamaniry izay manana fanafihana zonal lehibe kokoa, avelao aho hanazava fa tsy maintsy mametraka zavamaniry izay miteraka fahasimbana betsaka indrindra amin'ireo andalana izay feno isika, amin'ny ankapobeny, 2 sy 4. Araka izany sakanantsika ny fandaniam-bola be loatra tsy hanan-kery.
Mampiasà otrikaina amin'ny fotoana mety
Araka ny efa nohazavaiko, ao amin'ny Plants vs Zombies 2 dia manana fitaovana vaovao isika: ny otrikaina. Voafetra izy ireo ka mila mahafantatra ny fomba fampiasana azy tsara isika. Arakaraka ny maha-zava-dehibe ny zavamaniry no misy ny vokatra bebe kokoa ananan'ny otrikaina amin'izany. Zava-dehibe ny fampiasana ireo otrikaina amin'ny onjan'ny zombie ary, amin'ireo zavamaniry izay misy lanjany bebe kokoa na misy akony lehibe kokoa amin'ireo mpanafika. Matetika izahay no mampiasa ireo otrikaina amin'ny voninkazo sy tanam-boanio.
Karatra vaovao eto amin'ny tontolo volomparasy
Rehefa tonga any amin'ny tontolo volomparasy isika dia manana karatra vitsivitsy azontsika lalaovina. Ny safidin'ireto karatra ireto dia kisendrasendra foana, avy amin'ireo karatra ireo dia tsy maintsy misafidy ireo izay tadiavintsika hilalao isika. Saingy, amin'ny fotoana maro dia tsy hanana vintana isika ary hahazo karatra ratsy. Ahoana no hamahana izany?
Tsotra be, mivoaka ny fampiharana izahay, tsindrio indroa amin'ny bokotra Home ary avy eo mamafa ny fampiharana multitasking. Avy eo dia manokatra Plants vs Zombies 2 indray izahay ary hiova ny karatra an'izao tontolo izao volomparasy.
Fomba fandresena amin'ny laharana farany III: Tontolo Piraty
Raha ny filazan'i iMore, raha mampiasa ny fiofanana izay eo amin'ny sary ambony isika dia afaka mandresy io sehatra sarotra io. Ny fampiasana ny Bonk Choy sy ny Spikeweeds dia afaka mamakivaky ity haavo sarotra ity amin'ny indray mipy maso fotsiny isika.
Efa nanandrana ity fiofanana ity aho ary eny, nampitaiko ...
Atsaharo ny haavon'ny haavon'ny harena Yeti
Raha nanazava taminao tao amin'ny lesona an'ny lalao i Dave "ilay adala", rehefa hitantsika fa misy ambaratonga miaraka amin'ny Yeti eo akaikiny, midika izany fa hanana an'io mihantona manodidina io isika, fa raha mamono azy isika dia hanana harena. Ahoana anefa raha mahazo ilay harena isika ary very ilay haavo? Very tokoa ilay harena nantenaintsika mafy.
Raha manana ny harena ianao ary efa ho resy, avereno indray ny haavony ary mbola hitohy ilay mitovy ihany miaraka amin'ny harena mitovy ary afindrao ny sombinao hamita tsara ny haavony hahazoana ilay harena.
Raha miditra amin'ny ambaratonga Yeti isika dia mila mamita azy
Ny fitsipika ifotoran'ny Plants vs. Zombies 2 dia ireto manaraka ireto:
Raha miditra ambaratonga miaraka amin'i Yeti isika ary mandray ilay harena, dia mila mamita ilay ambaratonga isika mba hankafizantsika izay nalaintsika. Izany hoe, raha mandray ny harena isika dia tsy maintsy mamita ny haavony ary mandresy ny zombies, indray, raha tsy izany, very ny harena azontsika.
Ahoana ny famonoana ny zombies ahidrano amin'ny fomba mahomby
Amin'ny ambaratonga sasany, ny zombies ahidrano dia hiseho manidina ambonin'ny rano sy ny tany. Miteraka fahasimbana betsaka amin'ny zavamaniry izy ireo ary noho izany dia mila esorintsika izy ireo araka ny fahitantsika azy. Ahoana? Tsotra be, mampiasa kernel-put. Izany hoe, raha mahita zombie ahidrano isika dia tsy maintsy miomana amin'ny voan-kernel, raha tsy izany dia ho sarotra be ny mamono ny varevaka izay eo anilan'ny zombie.
Zombies dia manaraka hatrany ireo zotra mitovy
Andao jerena tsara amin'ny sehatra iray. Raha zombie dia avy amin'ny laharana 1, iray hafa avy amin'ny laharana 3 ary farany, iray hafa avy amin'ny laharana 5; raha very ny ambaratonga dia ho fantatsika fa rehefa averintsika indray ny haavony dia hisy zombies mitovy isa amin'ireo andalana iray ihany. Izany hoe, efa voafaritra mialoha ny haavony, tsy miova izy ireo. Zava-dehibe ny manamarina izay làlana arahin'ny zombie raha sanatria tsy maintsy mamerina ny haavony isika.
Fanamafisana hatrany amin'ny tsanganana voalohany
Fantatsika rehetra fa ny zavatra farany manafika ny zombies dia ny tsanganana voalohany. Noho izany, tsy maintsy araraotintsika izany mba hametrahana zavamaniry matanjaka ao amin'ireo tsanganana ireo mba hahafahan'ny zombies maty faran'izay haingana. Ny zavamaniry izay tokony hapetraka amin'ny tsanganana voalohany dia ny: kernel-pult, melon-put na cabbage-pult ...
Zavamaniry vs. Zombies ™ 2maimaim-poana
Fanazavana fanampiny - Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia misy manerantany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny tetika 10 ilainao handresena ny haavon'ny Plants vs Zombies 2
igove dia hoy izy:
Eo amin'ny ambaratonga faha-3 aho ary tsy afa-manoatra, fa tsy hoe satria tsy namono zombie aho, fa satria nijanona teo… tsy azoko, inona no hatao ???
Mamaly an'i igove
Heveriko fa tsy fahombiazana izany, satria izany zavatra izany no mitranga amiko, tsy afaka mandroso amin'ny andro faha-3 amin'ireo mummy aho.
Ny zava-misy mitovy amiko ihany no nitranga, nosokafako ny lakileny ary tsy misy zavatra hafa tokony hatao intsony …… .. Mijanona aho !!! Hitako fa tsy izaho irery !!!! Hamerina ny ipad aho mba hahitako izay mitranga …… .. Hotantaraiko anao izany !!!
Ie, misy inona? Mampandre xfa
Manana an'io olana io ihany aho, tafavoaka tamin'ny fikatsoana tamin'ny andro faha-3 saingy tafahitsoka indray aho tamin'ny andro 9. Tsy maintsy namerina tamin'ny laoniny aho, very ny fandrosoana rehetra. Nanomboka indray aho nefa tsy nampifandray ny kaontiko Facebook. Toa izany no olana. Efa nolazaiko anao izany.
tsss fa inona ny adin-tsaina raha esorina sy apetraka !!! mmmm Hataoko izany (tsy haiko ny fomba) satria mbola tsy mahita vahaolana aho: '(
sasas dia hoy izy:
Te handeha any amin'ny tontolo farany aho ary tsy manome ahy izay ataoko, fanampiana: c
Tsy azoko afindra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Azafady mba misy miteny amiko fa afaka manao zavatra ianao handehanana any amin'ny ambaratonga farany an'ny zavamaniry vs zombies 2
Efa nataoko! Unzip fotsiny ny App ary apetraho indray ary izao (;
Ander Serna Hdz dia hoy izy:
uchala ilay iray avy any egypta taloha dia ho tsapako fa tsy nahatafintohina ahy fa efa nandalo ny ambaratonga rehetra aho fa tamin'ny fomba dr zomboss ilay iray
ranomasina egyptiana taloha pirates wild western lavitra ho avy mainty taona morontsiraka onja lehibe sy lava-bato mangatsiaka mamoy fo aho amin'ny tontolo fahavalo aaaaaaaaaaa !!! mamoy fo izaitsizy
Valiny tamin'i Ander Serna Hdz
hey efa nandalo azy tamin'ny mummies day 3 aho
Efa nandalo ireo ambaratonga rehetra ireo aho izao ary tafapetraka amin'ny tontolon'ny onja lehibe ary avy eo dia mandalo ireo tanàna lava-bato very mangatsiaka ary mamoha ny tontolo maizina koa aho
Ny lesoka mbola mijanona amin'ny haavo 3 dia ny miditra amin'ny facebook, mamafa ny mombamomba anao ary mamorona iray hafa nefa tsy miditra amin'ny facebook, na raha tsy mamafa sy misintona ny fampiharana indray ianao, ary mamorona profil vaovao tsy misy tarehy, amiko io niasa
edgar_suarez dia hoy izy:
Mba hisorohana ireo lesoka ireo, ny nataoko dia ny fametrahana ny lalao, sokafy ary miandry ny bara farany ambony hanavao, hanidy ny lalao multitasking ary hamerina ny iPad, mandeha daholo izao rehetra izao; D
Mamaly an'i edgar_suarez
MBOLA VOAVAO NY IPOD, MBOLA ATAO FOANA NY PROGRAMA ARY ATOKO INDRAY INDRINDRA INDRINDRA, ARY NY PROGRAMY MITSANGATRA NY DAHATSORATRA AVY AMIN'NY LALANA
Naye dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy mandeha amin'ny ambaratonga 3.! Nanomboka faritra iray tamin'ny Facebook aho .. Avy eo tsy maintsy mamafa azy aho ary mametaka azy io .. Na toy ny ataoko dia manampy izany
Valiny tamin'i Naye
Miezaha hamafa ny kaonty Facebook anao, mivoaka ny lalao ary miditra indray. Raha tsy mety aminao izany dia mila averinao indray ilay izy.
Zidaco dia hoy izy:
misy olona hafa tafahitsoka amin'ny andro 9?
Valiny tamin'i Zidaco
Mamaly an'i sasas
Fahombiazana Max dia hoy izy:
Ahoana no ahazoako ny kintana?
Valiny tamin'i Maxxito
Raha vantany vao nahavita an'izao tontolo izao ianao, dia maro ny kintana miseho amin'ny ambaratonga efa vitanao ho azonao atao indray.
Mijanona eo amin'ny haavo 3 aho ary tsy haiko ny mandroso ilay laharana
Abraham Diaz dia hoy izy:
Mba hisorohana ireo tsy fahombiazana rehetra ireo dia tsy maintsy apetrak'izy ireo amin'ny iTunes ny lalao ary alefaso any amin'ny fitaovany, satria ity tsy fahombiazana ity dia eo amin'ny tontolo 2 saika hahatratra ny dingana farany, lazaiko anao ny antony nahatongavako teo! Ary tsy maintsy nofafako ilay lalao ary very ny fandrosoako!
Valiny tamin'i Abraham Diaz
Tsy fantatro izay mitranga fa ny ambaratonga 5 amin'ny tontolon'ny piraty dia tsy mandroso, misy mahalala ny antony
Olana iray amin'ny fananana ny kaonty Facebook mifandraika amin'izany.
Javier V dia hoy izy:
Voalohany dia nanana olana tamin'ny ambaratonga 3 aho, nanala sy nametaka ary nilalao nick hafa aho nefa tsy nifandray tamin'ny Facebook ary voavaha ny antsasa-dalana, nolalovako io ambaratonga io, fa isaky ny mahavita ambaratonga iray aho dia mihantona, ny zavatra ratsy indrindra dia ny zava-drehetra. nahavita an'i Egypt tamin'ny kintana 3 sy piraty 1 manantona indray eto amin'izao tontolo izao. TSY te hamerina mametaka ny zava-drehetra aho, toa ny mololo farany tsy azon'izy ireo atao ny manamboatra an'io fanamboarana io. Ankoatr'izay dia amidiny ny zava-drehetra! Efa mandrary ahy io, maharary, satria lalao mahafinaritra be io
Valiny tamin'i Javier V
Manana lakilema sivy any Egypt aho ary efa nanokatra ny ambaratonga rehetra any Egypt koa aho. Azoko atao ve ny manao zavatra izay hahasoa ahy amin'ireo lakileko sisa tavela? Ny lakilen'i Egypt dia tsy misy ilana azy any amin'ny Ranomasina Pirate.
siny dia hoy izy:
Maharikoriko anao ny nangalaranao ity lahatsoratra ity tamin'ny bilaogy iray tamin'ny teny anglisy
Mamaly amin'ny siny
Vantany vao vita ny fampidinana ny fonosana fanampiny, hanomboka hilalao aho ary hikatona ny fampiharana, mba misy mahalala vahaolana ve? misaotra 😀
Ahoana no hanokafako ny tontolo farany?
zeydorf dia hoy izy:
rehefa miditra amin'ny tontolo farany aho dia tsy mamela ahy hiditra
Mamaly an'i zeydorf
David castro dia hoy izy:
Misy milaza amiko hoe ahoana ny saokako #% £ ¶ mamoha izao tontolo izao 4 azafady !!
Valiny tamin'i David Castro
Rakkel dia hoy izy:
Ahoana no fomba ahazoako ireo lakilena 15 hiakatra avy any amin'ny faritr'i Egypte mankany amin'ny haavon'ny piraty? yuda !!!!! '
Valiny tamin'i Rakkel
erick ayala dia hoy izy:
Mba hanokafana ny tontolo farany dia tsy maintsy manangona kintana 24 ao amin'ny WILD WEST ianao ary hisokatra ny tontolon'ny DR CEREBRDO !!! pulent !!!
Mamaly an'i erick ayala
ity ny mailaka ataoko na inona na inona erick182428@gmail.com
mba ampio dia hoy izy:
Salama, tsy afaka nanokatra ny tontolo farany koa aho ary efa manana ny tontolo 24 isaky ny lalao feno. Inona no ataoko? Ny hany zavatra tsy ananako feno dia ireo fanamby, zara raha manana 77% aho
Valio azafady, azafady
Maria Castillo placeholder image dia hoy izy:
Manana ny olana mitovy amiko aho .. manana ny kintana rehetra aho nefa tsy mamela ahy hilalao ny faha-4. izao tontolo izao Vonjeo!!!
Valiny tamin'i Maria Castillo
andraikitra dia hoy izy:
Tena toy izany ve ny fanakanana ny tontolo farany? MISAOTRA
Mamaly ny andraikitra
Erick Manana kintana 44 any andrefana aho nefa mbola tsy afaka mankany amin'ny tontolo hafa, inona izany?
Tsy afaka milalao ny haavo 25 an'ny Wild West aho ary tsy hisokatra koa ny tontolo faha-4, efa manana kintana 24 aho
erick ayala ary manao ahoana ny tontolon'ny zombie mpitsabo e?
Lalo Monjaraz Guerrero dia hoy izy:
Inona ny tontolo faha-4 raha amin'ny ho avy izy io?
Valiny tamin'i Lalo Monjaraz Guerrero
Fika inona !! (esoeso)
Toa tsy tonga intsony ny lalao satria manangona ny kintana 24 handeha any amin'ny tontolo fahefatra aho ary tsy misy na inona na inona ... aaaaaa tiako ahodina ity lalao ity
Miala tsiny fa nijanona teo amin'ny efijery faha-5 an'ny tany egyptiana aho (mila pinch ireo zombie ary tsy hita ilay teboka). Misy mahay mandany azy ve?
Gabriel guzman dia hoy izy:
Vita ny famoahana ny kintana ...
tontolo taloha 40/40… ranomasina piraty 38/38 wild west 38/38
Tsy hanana ny tontolo faha-4 aho !!! Inona no tsy maintsy ataoko mba hanampiana ahy ... sa scam io ??? Hahaha…. raha misy mahalala
Valiny tamin'i Gabriel Guzman
Ny tontolo farany dia mihidy raha manana ny zavamaniry rehetra izy ireo. Vidio ireo zavamaniry tsy hita
Milli dia hoy izy:
Ahoana ny fomba hanokafako ny tontolo farany, efa nandalo ny iray tany egypta fahiny aho, ranomasina jiolahin-tsambo ary ny andrefana ary mbola tsy afaka miditra amin'ny tontolo faha-4 🙁
Mamaly an'i Mili
Angelita lele dia hoy izy:
uffa vaovao aho amin'ny lalao fa nandalo ny haavo 25 aho ary tsy afaka mihoatra ny 26 dia omen'izy ireo ahy ny xfa cheat
Valiny tamin'i Angelita Lele
Te handany ny zava-drehetra aho dia hoy izy:
Te handany ny zava-drehetra aho
Valio aho Te handany ny zava-drehetra
Laia dia hoy izy:
Azoko atao ve ny milaza amiko ny fomba ahafahako mandany ny faha-18 amin'ny egyptiana taloha? Ampio aho azafady.
Valiny tamin'i Laia
manolite dia hoy izy:
Quieeerooo ny tontolo fahefatra !!!!
Mamaly an'i manolita
Salama azafady mba ampio aho .. Eo amin'ny haavo ny Wild West aho ary afaka 24 andro ary manana keychain aho fa tsy misy fomba hanokafana ny tontolo farany .. ampio azafady
Nandalo ny zava-drehetra aho
Tsy afaka miditra amin'ny tontolo fahefatra aho! Novakiako fa tsy maintsy nandalo ny ambaratonga 10 an'ny Wasteland of Evil aho, nataoko izany ary tsy nisy ... Efa ananako avokoa ny fanamby sy ny kintana rehetra, fitaka izany.
Salama, efa namoha ireo tontolo 3 aho, manana ny lakile aho saingy toa mainty tanteraka ny efitrano ary tsy afaka miditra aho, azafady mba ampio
Hayabusha Alfamnc dia hoy izy:
Namana manana ZTE Cel aho misintona azy dia te hanokatra azy aho fa mamoaka ahy, inona no ataoko?
Valiny tamin'i Hayabusha Alfamnc
mange kyuby dia hoy izy:
mila mahazo ny lakile rehetra ianao ary mahazo ny zavamaniry rehetra -_-
Mamaly an'i mange kyuby
Misy mahalala ve ny nanjo ahy tamin'ny tontolo faha-4 por fa ?????
Jeison dia hoy izy:
Viviana sy Patty dia zavatra mitovy amiko no mitranga amiko fa manana an'io amin'ny Android tsy haiko raha izany satria satria ho an'ity tontolo ity dia tsy maintsy fanavaozana izany, hiezaka ny handalo ny ambaratonga 3 rehetra aho ary hampitandrina anao
Valiny tamin'i Jeison
skr dia hoy izy:
ny zava-mitranga dia tsy tokony hosokafanao amin'ny kaonty facebook ny lalao raha tsy manome anarana ny nick anao fotsiny ianao ary vonona ho an'ireo mijanona amin'ny haavo 3
Mamaly an'i skr
Oscar moreta dia hoy izy:
Eny, napetrako amin'ny iPad 4 aho ary efa nandalo ireo tontolo telo ireo, izany hoe, 24/24 tamin'ny olako rehetra dia ny tsy hisokatra ny tontolo farany, afaka misy manampy ahy ve ianareo?
Mamaly an'i Óscar moreta
jose madero dia hoy izy:
Tsy haiko ny mamaky ny ambaratonga faha-24 an'i Egypte taloha…. Misy olona afaka manampy ahy ve?
Mamaly an'i jose madero
Misy olona afaka manampy ahy hamita ny haavo 25 any Egypty ve fa ny jiolahin-tsambo sy ny koboy tsy manokatra ny lalao ary misy afaka manampy ahy?
holis dia hoy izy:
Ahoana no hataoko amin'ny ambaratonga faha-18 eto amin'ny tontolon'i Egypt, tsy vitako, tsy haiko ny manao azy, azafady, fanampiana kely, misaotra anao !!!!!!!!
Mamaly an'i holis
kamaleon dia hoy izy:
Rehefa mandalo ny bonus aho satria raha vao resy aho dia mamerina ahy ho 1. Ary mbola tsy fantatro hoe ahoana no hamohana ny tontolo farany, ao amin'ny 25/25 voalohany aho amin'ny 24/25 faharoa ary amin'ny 24 fahatelo / 25. Misy mahalala?
Mamaly an'i kamaleon
Toy izany koa no mitranga amiko. Ahoana no hidirantsika amin'ny tontolo 25/25 an'ny Ranomasina Pirate sy ny Wild West
voahidy ao amin'ny ambaratonga egyptiana 5 aho. tsy mamela ahy hanao ny pellisco amin'ireo zombie ny takelaka misy ahy, misy ve ny fangatahana ny olana?
BBB dia hoy izy:
Ahoana ny fomba hahalalanao any amin'ny tontolo farany
Mamaly an'i bbb
Tsy afaka miditra amin'ny baddie lehibe amin'ny tontolon'ny jiolahin-tsambo sy ny tontolon'ny koboy aho, tsy mahazo ny pea manga sy ny voahangy
mirza dia hoy izy:
Ao amin'ny tontolo an-dranomasina piraty dia tsy afaka manokatra ambaratonga 25 tsy misy mr miala aho rehefa manokatra azy azafady
Mamaly an'i mirza
maito dia hoy izy:
Tsy afaka miditra amin'ny tontolo 4 toa an'i c aho?
Mamaly an'i maito
Salama! Nandany ny 25/25 andro tany Egypta aho, tany amin'ny tontolo Pirate tamin'ny 24/25 ary tany Andrefana ihany koa ny 24/25; Manana lakile aho ary tsy misokatra ho ahy ny tontolo farany. Tsy hitako izay hatao. Rehefa nandalo ny haavo 24 an'ny Andrefana aho dia nilaza tamiko izy fa mbola betsaka ny ambaratonga tokony handalo saingy tsy izany no izy satria nandalo azy rehetra aho. Ny ataoko? Mila fanampiana aho rehefa taloha
Mitovy aho, raha mahafantatra zavatra ianao dia ampahafantaro ahy
Mitovy amin'i Caroline aho fa manana lakile roa. Ny hatao
TOA NY AOGOSITRA hiditra an'izao tontolo izao 4 ary nandalo ny tontolo telo voalohany aho ary nijanona tsy nilalao tamin'ny ambaratonga farany tsy nampoizin-dry zareo izay nahatonga ny 24 ambaratonga voalohany ho sarotra.
Valiny amin'i EDGARDO
Soso-kevitra iray amin'ny fijoroana farany III: tontolon'ny piraty, ampiasao melonpultas miisa 5 ao ambadika ary ny kennel 5 miaro azy ireo ary tsy hoe handalo mora foana io haavo io ianao, fa koa haingana be n_n '
Novakiako fa ny ambaratonga 25 amin'ny tontolon'ny piraty sy ny andrefana ary ny tontolo ho avy dia mbola tsy misy satria mila mahazo fanavaozana izy ireo. Efa nisy nilalao an'io haavo io ve?
Pedro Paramo dia hoy izy:
Tsy mila ny 25/25 an'ny Wild West fotsiny aho
Valiny tamin'i Pedro Paramo
yeremi dia hoy izy:
Tsy afaka nanokatra ny tontolo farany izy satria nahavita ilay lalao in-droa, fa indroa ianao mahita ny zava-drehetra satria tsy afaka manokatra ny farany aho, lazao amiko raha
Valio i yeremi
Milalao ny piraty miisa 25 aho ary mamonjy any andrefana dia mahafinaritra ny lalao rehetra saingy avy amin'ny inona no hahitako fa efa nahavita tosdos aho raha tsy afaka manokatra ny tontolo farany
sampany dia hoy izy:
Mmm efa nandalo ireo tontolo 3 aho ary ny fanamby rehetra mmm dia manana kintana 117 sy lakile 19 avy any andrefana aho ary tsy hosokafana ny ambaratonga farany.
Mamaly amin'ireo sampana
Vita ny egyptiana taloha 3, ny ranomasina piraty ary ny tandrefana ary manana lakile aho saingy tsy manokatra ny tontolo manaraka ho ahy, inona no tokony hataoko? misy manampy ahy
Nilaza tamiko i Fami fa ny fanangonana kintana 24 any andrefana dia hanokatra ny sarintany farany saingy mbola tsy nanandrana XD aho
Tafahitsoka amin'ny tontolo faha-4 aho, ilay iray amin'ny ho avy, ka hatramin'ny faha-24 fa tsy afaka milalao ilay farany aho, ilay iray miaraka amin'ny sefo, ary afaka mankany amin'ny tontolo faha-5 ve aho
Izaho dia tsy miova, efa nandalo ireo tontolo telo aho ary tamin'ny fahefatra dia tsy nahita ny 24/25 farany aho fa tsy mivoha ny varavarana, azafady ampio, manana lakile aho
Mamaly an'i blancaorolla
pablo123456 dia hoy izy:
Tsy afaka mandany ny andro faha-5 any Egypta amin'ny tsindry mahery aho
Mamaly an'i pablo123456
Salama nahazo ny tontolo fahadimy aho ¿? Amin'ny mainty Tsy avela mialoha Misy olona mahalala zavatra arahabaina
Andres zavatra mitovy amin'izany no mitranga amiko ary tsy hitako izay hatao. Vonjeo azafady !!!!!
Rehefa niditra ny Castle izy dia efa vitako ny tontolo rehetra
olgimar dia hoy izy:
Fantatr'i Rent ny fomba ahafahako manokatra ny haavo 5 azoko ny lalao manontolo ary tsy sokafako izany ambaratonga izany
Mamaly an'i olgimar
nisy olona afaka niditra tamin'ny tontolon'ny lapa…. ampio azafady
chochi dia hoy izy:
Efa nahavita ny haavon'ny Egypta taloha aho rehefa tafita tamin'ny tontolo manaraka izay fantatry ny olona iray
Mamaly an'i chochi
Ali vega dia hoy izy:
Tapitra izao tontolo izao sy roa, fa tsy manome lakile hanokafako an'izao tontolo izao izy ireo.
Mamaly an'i Ali vega
Eo amin'ny moron-dranomasina haavo 6 an'ny onja lehibe aho ary miorim-paka ao anaty rano 16 aho, ahoana no hampitana azy?
Tsy afaka mividy ny lobaka 16000 locker aho, ao anaty boaty misy ny faladiany dia mijanona amin'ny 9900 na dia mandray ny faladiako aza aho fa tsy mandroso ny isa… ..
Ny tsara indrindra dia ny miandry ny zaridainanao hampitombo ny zavamaniry mba hananan'izy ireo hery fanampiny
Tapitra ny tontolon'ny onja lehibe ary tsy hisokatra amiko ny tontolo manaraka, mivoaka mainty izy. Ahoana ny fomba hidirako azy .. Nilalao vaza aza aho ary tsy nisy: (ampio plissss !!!!
Fa maninona no tsy mamoha ny tontolo farany raha efa nandalo ny ambaratonga rehetra aho?
Ahoana no hamohana ny ambaratonga farany
Ampianaro aho afaka misy miteny amiko ny fomba hamaha ny tontolo fahavalo nanarona ireo tsy ambaratonga rehetra ary izaho koa dia nanao rakitsoratra tamin'ny valin'ny iraka tsy manam-petra rehetra ataoko
efitrano monserrat dia hoy izy:
masina aho.o manantena aho fa handao volafotsy tsy manam-petra
Valiny tamin'i Monserrat Salas
holi co.o manantena aho fa handao vola tsy manam-petra,
masoandro tsy manam-petra,
Tsy lany masoandro mihitsy aho
Inona no ilaina hanombohana ny ambaratonga farany
Mario Ramos dia hoy izy:
Vita ireo ambaratonga rehetra ary manana lakilasy roa aho ary ny ambaratonga farany amin'ny mainty (mihidy) dia misy fomba ve hanokafana azy ??? ... Ary misy mahalala ve hoe maninona no nohidiako Pinchorroca izay heverina fa tsy maintsy nananako nanokatra azy tamin'ny andro faha-18 an'ny Ranomasina Pirate ary raha misy ny fomba hamahana azy ary naveriko aza ny haavony feno ary tsy nisy ... Misaotra mialoha ny valinteninao ...
Valiny tamin'i Mario Ramos
iker rafa gal dia hoy izy:
Efa nandalo ny tontolo rehetra aho. Ankehitriny ahoana no hamohako ny tontolo misy anao? Ity fambara ity koa dia manana lakile 2 aho ary vola madinika 467 tapitrisa dia efa somary mankaleo
Mamaly an'i iker rafa gal
Mametraha trucus bebe kokoa
Salama, misy mahalala ve ny fomba ahafahako mandroso raha efa nandalo ny haavon'ny zava-maniry vs zombies 2 aho ary manana lakilen'ny tontolo roa, saingy tsy manana tontolo hisokatra intsony aho ???
Alex guadalajara dia hoy izy:
Vita ny tontolo rehetra tsy afaka miditra amin'ny farany milalao azy amin'ny sela android aho misaotra
Valiny tamin'i Alex guadalajara
Izaho koa dia efa nahavita nilalao tamin'ny tontolo rehetra ary manana lakile roa aho. Misy ampahany Ahoana ny fidirana amin'ny tontolo hafa zavatra toy ny Tselatra rehefa novohana
Andres Huertas dia hoy izy:
Misy olona afaka manazava amiko ve ny zava-nitranga. Nahavita ny tontolo sy ny zava-drehetra aho, ary nivoaka tamin'ny iray aho fa manana fahefana tsy manam-petra amin'ny vola sy vatosoa ary zava-maniry rehetra, inona izany ????
Valiny tamin'i Andres Huertas
Manana fisalasalana aho, rehefa mandalo izao tontolo izao dia voasokatra ny manaraka na raha tokony hampiasa ny lakile aho dia efa mandeha amin'ny ranomandry fa mampiasa lakile foana